Maitiro Ekugadzirisa Iyo Yekutsika Peji | Martech Zone
Maitiro Ekukwirisa Peji Yekumhara
Svondo, October 21, 2012 Svondo, October 21, 2012 Douglas Karr
Kungoshanduka kudiki kushoma kune yako peji yekumhara kunogona kukonzera mhedzisiro iri nani kune rako bhizinesi. Mapeji ekumhara ndiyo yekuenda yako yekufona-kune-chiito uye poindi yekushandurwa uko mushanyi angave anotungamira kana kutendeuka. Heano zvimwe zvakakosha zvinhu zveyakagadziriswa peji yekumhara. Ramba uchifunga kuti hatisi kungogadziridza peji reinjini dzekutsvaga, tiri kugadzirisa iro peji reshanduko, futi!
Peji Musoro - zita re peji rako rinozoratidzwa mumhedzisiro yekutsvaga uye masocial share uye ndicho chinhu chakakosha pane peji kunyengerera mumwe munhu kuti abaye. Sarudza zita rinogombedzera, chengeta pasi pemavara makumi manomwe, uye sanganisira yakasimba meta tsananguro yeiyo peji - pasi pemakumi gumi nematanhatu mavara.
URL - Nekuti yako URL inoratidzwa mumhedzisiro yekutsvaga, shandisa ipfupi, ipfupi, yakasarudzika slug kutsanangura mushandirapamwe.
musoro wenyaya - ichi ndicho chinhu chakasimba pane peji rekukwezva mushanyi wako kuti aenderere mberi uye kuzadza fomu. Mapeji Anomhara kazhinji haashaye zvekufambisa pamwe… iwe unoda kuti muverengi atarise pane chiito, kwete sarudzo. Shandisa mazwi anotyaira mushanyi mukuita uye wedzera pfungwa yekukurumidzira. Tarisa pane mabhenefiti ayo muenzi achawana nekuzadzisa kunyoreswa.
Social Sharing - sanganisira mabhatani enharaunda. Vashanyi vanowanzo govana ruzivo nema network avo. Mumwe muenzaniso ndeye peji rekunyoresa chiitiko… kana iwe uchinyoresa chiitiko, iwe unowanzoda kuti vamwe vari mukati medandemutande vauyewo kuchiitiko ichi.
mufananidzo - kuwedzera mufananidzo wekutarisa wechigadzirwa, sevhisi, whitepaper, kunyorera, chiitiko, nezvimwewo chinhu chinoonekwa icho chinowedzera shanduko pane peji rako rekumhara.
gutsikana - Chengetedza zvemukati pane rako rekumhara peji mupfupi uye kune iyo poindi. Usatarise maficha uye mutengo, pachinzvimbo tarisa pane zvakanakira kuzadza fomu uye kuendesa ruzivo rwako. Shandisa zvinyorwa zvine mabara, misoro yemisoro, yakashinga uye italic zvinyorwa kusimbisa.
Testimonial - Kuwedzera chairo chipupuriro kubva kumunhu uye kusanganisira mufananidzo wemunhu kunowedzera kutendeka kuchipo. Sanganisira zvavari, kwavanoshanda, uye mabhenefiti avakawana.
fomu - the mashoma masimi pane yako fomu, ndipo paunowedzera shanduko dzaunowana. Rega vanhu vazive ruzivo rwupi rwaunoda, nei uchiida uye kuti ucharishandisa sei.
Minda Yakavanzwa - tora rumwe ruzivo nezve mushanyi senge inongedzera sosi, ruzivo rwemushandirapamwe, mazwi ekutsvaga avakashandisa uye chero rumwe ruzivo rwunogona kukubatsira kuti uvagadzirire semutungamiri uye uvashandure kuva mutengi. Pushira iyi data kune database inotungamira, Kushambadzira kushandisa michina kana CRM.
zviri pamutemo - urikutora ruzivo rwemunhu uye unofanirwa kunge uine chirevo chekuvanzika uye mazwi ekushandisa kuti unyatso tsanangura, zvakadzama, mashandisiro aunoita ruzivo rwevashanyi.
Heano zvinyorwa zvinoenderana zvinogona kuve zvekufarira:
Mashandisiro Keywords zvinobudirira
Maitiro ekugadzirisa peji re Kutsvaga Kwenzvimbo
Maitiro ekugadzirisa a Youtube Video
Maitiro ekugadzirisa ako Title Tags
Maitiro ekugadzirisa a Blog Post
Tags: kutendeuka optimizationkutendeukafomukumhara pejikumhara peji mafomukumhara peji optimizationasaitagadzira peji rekumharakunyoresa peji optimization
B2B Tungamira Chizvarwa Manifesto
Iko Kugadzirwa kweMazano
Nov 7, 2012 na10:56 PM
Kunyange ini ndichifunga kuti dhizaini iyi ingave nzvimbo yakanaka yekutanga kune mamwe maindasitiri, kune vamwe izvi zvingangove nezvakawanda zviri kuitika. Chete nzira yekunyatsoziva ndeyekuyedzwa kweA / B.
Nov 30, 2012 na5:39 AM
Nice post! Ichi chinhu chakakosha kuverenga ndinochitenda zvakanyanya. Basa rakanaka.